मताधिकार र कर्तव्य
विचार मताधिकार र कर्तव्य पिताम्बर पाण्डेय
बाह्रखरी - सोमबार, मंसिर १८, २०७४
मतको अधिकार मताधिकार
मतदाता नामावलीमा नाम भएको १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक सबैले आफूले चाहेको पार्टी वा व्यक्तिलाई कुनै करकाप, डरधम्की, लोभलालचमा नपरी स्वेच्छाले मत खसाल्ने अधिकार हुन्छ । यसैलाई मताधिकार भनिन्छ ।
मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दा आफ्नो मतबाट एक इमानदार, स्वच्छ छविको, विकास प्रेमी, ’भिजन’ र योजना भएको जनभावना बुझ्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्ने र सबैलाई एकताबद्ध गरी सँगै लैजान सक्ने सबल र सक्षम उमेदवारलाई छान्नु पर्छ ।
हामी नेपाली अधिकार माग्नमै व्यस्त र मग्न छौँ । अधिकारसँगै कर्तव्य पनि हुन्छ र त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बिरलै सोच्छौँ । कसैले त्यस्तो सोचेको भए त आज देशको अवस्था पक्कै यस्तो हुदैनथ्यो । अधिकारसँग कर्तव्य पनि हुन्छ भन्नेतर्फ खासै ध्यान दिइँदैन ।
आफूले मतदान गर्ने उमेदवारको नैतिक पतन भएनभएको, भ्रष्टाचारमा दोषी भएनभएको, हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरीडकैती, दलाली, गुन्डागर्दीजस्ता अपराधमा संलग्न भए नभएको पत्ता लगाउने र त्यस्ता उमेदवारलाई अस्वीकार गर्ने मतदाताको कर्तव्य हो । साथै आफ्नो मतबाट विजयी प्रतिनिधिले उसका बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यो गरेन, जनताको पक्षमा काम गर्‍यो गरेन, उसले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा समयसमयमा आयो आएनजस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । उसले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई एकताबद्ध गर्न सकेको छ छैन, विकास निर्माण कार्य सञ्चालनमा त्यस क्षेत्रका जनता सँगसँगै छ छैन, समाजलाई सँगसँगै हिँडाउन सकेको छ छैन भन्नेजस्ता विषयमा चासो राख्नु र सूचना माग्नु पनि मतदाताको कर्तव्य हो ।
आफ्नो मतबाट छानिएको उमेदवारको जिम्मेवारी मतदाताले लिनुपर्छ । हाम्रो मतले कसैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्छ भने कसैलाई त्यो अधिकारबाट बञ्चित गराउन पनि सक्छ । मतदाताले कसैलाई निर्वाचित र कसैलाई पराजित बनाउन सक्छन् । हामी नेपालीमा अर्काको आलोचना गर्ने, असन्तुष्टि र विमति जनाउने प्रवृत्ति छ । अर्काको कमी कमजोरी, त्रुटि, दोष, अवगुणमात्र थाहा हुन्छ ।
हामी आफूलाई बिर्सेर अर्काको आलोचना गर्दागर्दै विवेक नै त गुमाएका छैनौ ? हामी आफैँ न्याय मूर्ति बन्छौँ । हामी पटकपटक गल्ती दोर्‍याउँछौँ तर फेरि आैँला उठाउछाैँ त अर्कोतर्फ । हाम्रो छनोट, मत र उमेदवारी सक्षम नभए, काम गर्न नसके असफल भएको भए किन हामी उसलाई हराउन सक्तैनौ ? किन तिमी गलत छौ, जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनौ, त्यसैले तिमी योग्य छैनौ भन्न किन नसकेको ? त्यो पनि गोप्यरूपमा, शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान मार्फत् ।
फलस्वरूप, उसले आफ्नो गल्ती थाहा पाओस्, आफूले जनताको मन जित्न नसकेको बुझोस्, आफूले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको थाहा पाओस् अनि पो सुध्रिन्छ मान्छे । अनि पो चिन्तन र मनन गर्छ मान्छेलले । अनि पो साच्चिकै इमानमा उभिन्छ मान्छे । यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नसक्ने हामी मतदाता ने हो । आजसम्मका घटनाक्रम र विकास नहुनु, अस्तव्यस्त र अस्थिर हुनुमा मतदाता पनि अरूभन्दा कम दोषी छैनौ ।
त्यसैले मत दिनुअघि मतदाताले आफ्नो क्षेत्रमा उठेका सबै उमेदवारका बारेमा जान्नुपर्छ । ऊ कस्तो व्यक्ति हो ? के गर्छ ? कहाँबाट आएको हो ? उसको पृष्ठभूमि के हो ?
उसको चरित्र कस्तो छ ? आफ्नो क्षेत्रका बारेमा जानकार छ छैन? त्यहाँका समस्या, अभाव अनि गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा उसका के कस्ता योजना र दृष्टिकोण छन् ? समाज एकताबद्ध गर्न सक्छ सक्दैन ? जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भने हामीले हाम्रो कर्तव्य राम्रोसँग पूरा गर्न सक्छौँ ।
आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्ने र फेरि पुरानै गल्त नगर्ने प्रण गरौँ । मताधिकारको सदुपयोग गर्दा विवेक प्रयोग गरी कर्तव्यको पनि ख्याल गराँै ।
सोमबार, मंसिर १८, २०७४ मा प्रकाशित